सिंहदरबार भित्र एभरेष्ट बैंकको एटिएम	By नवीन सन्देश on	३ आश्विन २०७३, सोमबार १२:०५
काठमाडौँ । सिंहदरबार भित्र एभरेष्ट बैंकको एटिएम सञ्चालनमा आएको छ ।
अर्थ सचिव शान्तराज सुबेदी र एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ए.के. अहलुवालियाले नयाँ एटिएम सेवाको संयुक्त रुपमा समुद्घाटन गरेका हुन् । एभरेष्ट बैंकले हाल आफ्ना ६१ वटा शाखा, ५ एक्सटेन्सन काउन्टर, २४ राजश्व संकलन काउन्टर र ८६ एटिएमबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
बैंकले एसियन पेन्टस् न्युबिज “बेस्ट म्यानेज्ड कमर्सियल बैंक अवार्ड २०१३” का साथै आ.ब. २०६८/०६९मा “वाणिज्य बैंक मध्येमा सर्वा्धिक करदाता” को सम्मान प्राप्त गरेको थियो ।
तस्वीर	टीसीएलको कर्भ टिभी बजारमा काठमाडौँ । टीसीएलले फेरि पनि आफ्नो नयाँ आयाम र उत्पादनहरुको डिजाइन ...